बिक्रीचाप बढ्यो, नेप्से घट्यो
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १२ पुस | पुष १२, २०७४
मंगलबार नेप्से परिसूचक २० अंक घटेको छ । बजार खुलेको केही समयपछि तीव्र गतिमा ओरालो लागेको नेप्से कारोबारको एक घन्टा अवधिपछि केही थामिएको थियो । त्यसपछिको कारोबार अवधिभर सामान्य उतारचढाव रहेको नेप्से अन्तिम समयसम्ममा १ दशमलव ४१ प्रतिशत घटेर १ हजार ४ सय ४७ बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
निरन्तर सात कारोबार दिन नेप्से ओरालो लागेपछि लगानीकर्ताको मनोबल घटेको छ । त्रसित लगानीकर्ताहरूले सेयर बिक्री गर्न थालेपछि बजारमा बिक्रीचाप बढेको छ । नेप्से पछिल्ला आठ दिनमा ७४ दशमलव १२ अंक घटेको छ । बैंकहरूले लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेपमा आकर्षक ब्याज पाउने भएपछि लगानीकर्ता सेयर बिक्री गरी निक्षेपतर्फ लागेका छन् ।
‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन ४ दशमलव १६ अंक घटेर ३ सय ४ दशमलव ८५ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन २८ दशमलव ३२ स्केलमा पुगेको छ । ओभरबट जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर बिक्री चाप बढेको संकेत गर्दछ । यस दिन १ सय ५९ कम्पनीको ६ हजार २ सय ५ पटकको कारोबारमा रु. ५४ करोड २ लाख ९१ हजार १ सय ४४ बराबरको १० लाख ३८ हजार २ सय ९८ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेर रु. १६ खर्ब ८२ अर्बमा सीमित भएको छ ।
एकबराबर एक अनुपातमा बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको यस दिन सर्वाधिक रकमबराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । यस दिन सो बैंकको रु. ८ करोड ३३ लाखभन्दा बढीको सेयर किनबेच भएको छ । त्यसैगरी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको यस दिन रु. ६ करोड ९२ लाखबराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । महुली सामुदायिक लघुवित्त संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य यस दिन करिब १० प्रतिशत बढेको छ । प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको सेयरमूल्य यस दिन ६ दशमलव ७ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएका १ सय ५९ कम्पनीमध्ये १३ कम्पनीको मात्र सेयरमूल्य बढेको छ भने १ सय २६ कम्पनीको घटेको छ । बाँकी २० कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
कारोबारमा आएको ‘अन्य’ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत बढेको छ । ट्रेडिङ समूहको परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव ४१ प्रतिशत घटेको छ । त्यसैगरी, विकास बैंकको परिसूचक २ दशमलव २१ प्रतिशत, वित्त समूहको २ दशमलव १६ प्रतिशत, जलविद्युत् र माइक्रोफाइनान्स समूहको १ दशमलव ८४ प्रतिशत, बिमा समूहको १ दशमलव ८३ प्रतिशत, बैंकिङ समूहको १ दशमलव ४५ प्रतिशत, उत्पादनमूलक समूहको १ दशमलव २१ प्रतिशत र होटेल समूहको १ दशमलव ११ प्रतिशत घटेको छ ।